दुई सातादेखि मार्तडी–कोल्टी सडक अवरुद्ध
आफूले भनेको नभएएपछि नगरप्रमुखविरुद्ध कार्यालयमा धर्ना
बीपी र पुष्पलालका दुस्मनहरू
यस्ता छन् जोनसनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण मिति
दुई साता निःशुल्क आधारभुत सुविधा
घटना र विचार, न्युज डेस्क !4months ago March 20, 2019
के तपाईं उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलियाको सिड्नी आउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? तपाईंहरूको सिड्नीमा कोही आफन्त वा साथिभाइ छैनन् ? सिड्नी झर्नासाथ बस्ने–खाने सुविधा नहुँदा दिक्क मानिरहनु भएको त छैन ?
यस्तो परिस्थिति परे पनि अब आत्तिनु पर्दैन । बढीमा दुई साता त तपाईंहरूका लागि यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिन्छन् सिड्नीका सरोज भट्टराईले ।
तपाईं एक कल मात्र गर्नुस्, तपाईंलाई लिन एअरपोर्टमा नै पुग्छन् सरोज, रात होस् या दिन । कोठा खोजिदिन्छन् र दुई हप्ता तपाईंलाई साथ दिन्छन् । यस्ता मनकारी प्रवासी नेपाली ठिटो सरोजले यतिबेला शुरूको समयमा कोही र केही नभएर अलपत्र परेकाहरूका लागि ‘वाह’ गर्नलायकको काम गरेर सबैको प्रशंसा कमाएका छन् ।
‘मन कमाएपछि धन पनि कमाउन सकिन्छ’– जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मसन्तुष्टि रहेछ भन्ने बुझेका भट्टराई अगाडि भन्छन्– ‘अष्ट्रेलियामा धेरै धन भएर पनि मन नभएका र जीवन अस्तब्यस्त भएकाहरूको पीडा मैले देखेको छु । तिनीहरूका अगाडि म धनी होइन र ?’ उनको प्रश्न छ ।
आफू पनि शुरूमा विद्यार्थीकै रूपमा अष्ट्रेलिया आएको सरोज सम्झन्छन् । ‘मलाई थाहा छ शुरूमा विद्यार्थीहरूको पीडा कस्तो हुन्छ । भन्छन् नि सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ । मैले देखेको र भोगेको छु पीडा । त्यही कुराले मन छोयो मलाई अनि यो काम अगाडि बढाएँ ’, उनले भने ।
सरोजको यो कार्यको प्रशंसा र चर्चा नेपालसम्म पुगेको छ । ‘आजकल त नेपालबाटै उड्ने बेलामा कल आउँछ अनि म सिड्नीको एअरपोर्टमा लिन पुग्छु,’ सरोजले थपे । तनहुँका सरोज अष्ट्रेलिया आएको पाँच वर्ष मात्र भएको छ । उनि दुई वर्ष ब्रिजबेनमा बसे भने विगत तीन वर्षदेखी भने सिड्नीमा बस्दै आएका छन् ।
सरोजले नेपाल बस्दा केही समय ओशो तपोवनमा स्वामी अरूणसँग पनि धेरै समय बिताए । जीवनमा खुशी नै धन हो भन्ने मान्यतालाई मनमा राखिरहे । धन टन्न भएर खुशी हुन नसक्नेहरूको लागि सेवाबाट खुशी मिल्छ भन्ने कुराको गहिरो अध्यन गरेका छन् सरोजले । यसैले पनि आफूलाई प्रेरित गरेको उनको भनाई छ । ‘म आफू बाँच्न र जीवनलाई अगाडि बढाउन मेरो आफ्नै काम पर्याप्त छ । तर विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु मेरो लागि ठुलो खुशीको कुरा हो’, उनले भने ।
सिड्नीमा करियर काउन्सुलरको रूपमा पनि चर्चित छन् सरोज । कसरी काम पाउने ? कुन काम पाउन के गर्नु पर्छ ? कुन–कुन र कस्तो–कस्तो काम कहाँ पाइन्छ ? मानिसहरूसँग कसरी डिलिङ गर्ने ? जस्ता महत्वपूर्ण पाटामा सरोजले काउन्सिलिङ दिनेगरेका छन् ।
बढीमा दुई हप्ता निःशुल्क बसेको स्थानमा पछि फेरि बस्न मन लागेमा न्यूनतम रकम तिरेर निरन्तर बस्न सक्ने ब्यवस्था सरोजले मिलाइदिन्छन् । विद्यार्थीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने ध्येयले उनले जतिसक्दो थोरै रकममा बस्ने ब्यवस्था पनि गरिदिन्छन् । भन्छन्, ‘म माध्यम मात्र हो, विद्यार्थीहरूको निमित्त लागिपरेको छु । प्रतिसेकेन्डलाई डलरमा हिसाब गर्ने यो समाजमा मनको खुशीको लागि दौडिरहेको छु ।’ यसो भन्दै भावुक बने सरोज ।
बेपत्ता भएको ११ दिनपछि गौतमको शव भेटियो
स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि मैनबत्ती बालेर ‘पावरहाउस’ रुँग्दै कर्मचारी
बुध, साउन ८, २०७६
अवैतनिक वाणिज्यदूतका प्रतिबद्धता
कालोबजारी गर्ने सात तरकारी व्यापारीमाथि कारवाही
छानबिन समितिको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट